ကြက်ခြေနီ - ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှ။, မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ '' ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ပြည့်ထား
အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်၏ situation'm အရေးပါမှု pyewon အများပြည်သူကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာစင်တာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကတည်းက. ကြက်ခြေနီနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုများအတွက်နွဲ့ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Medical Center မှများ၏ကျန်းမာရေးပြီးခဲ့သည့်နှစ်တစ်ရာအရပျ, အခြို့ခဏတနှ dwaetdago ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
ထိုကဲ့သို့သောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့်မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုစင်တာများအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘေးဖယ်အုပ်စုများတနှ fleeting ခဲ့သည့်အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်တဲ့အခါသုံးနိုင်တယ်သောမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
ကြက်ခြေနီနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့် 18 ရက်, ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံများတွင်, Hyundai မော်တော် Chung Mong-Koo ဖောင်ဒေးရှင်းစင်တာနှင့်အတူပထမဦးဆုံးနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပဆွေးနွေးမှုများကျင်းပခွင့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ကြက်ခြေနီများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ဝင်ငွေနည်းကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ကြပါပြီသို့မဟုတ်အကြောင်းကို6တထောင်နွဲ့သောလူဇန်နဝါရီလသည်အထိအကြောင်းခုနစျပါးကပြောပါတယ်.
စာသား Links များ
မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ, 8000 အနှစ်ကိုပထမဦးဆုံးကုသပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများ '' မျှော်လင့်ချက် Medical Center မှများအတွက်ဆေးရုံစောင့်ရှောက်မှု